Fitaovana maodely | fitsapana | famaritana modely - Modelarski Świat
Sokajy: Fitsapana sy fampisehoana
Mpikarakara atrikasa avy amin'ny HobbyZone - mendrika ve izany, tsy mendrika ve izany? - Famerenana
Toy ny modely rehetra sy ny mpankafy DIY dia nandany fotoana be aho nitady ny patanty tsara indrindra hikarakarana ny toerana fialamboliko. Mino aho fa ny toeram-piasana voadinika tsara sy milamina no olana fototra sy lehibe hahafahana mankafy tanteraka ny fahafinaretana amin'ny fanaovana modely na hetsika asa kanto na teknika mitovy amin'izany. Ny fikorontanana eo ambony latabatra dia midika fahakiviana sy tsy fahombiazana, fako ...
Putty manasitrana maivana - voadona sa putty?
Fenoy ny maodely - dingana iray miharihary sy manan-danja satria mandreraka sy mandany fotoana. Raha namaky ny fidirana momba ny putty ianao dia efa nianatra momba ny tombony sy fatiantoka amin'ny fomba sy vokatra isan-karazany. Androany dia namorona tànana tamin'ny famoronana tsy dia malaza loatra eto aminay izahay - ny putty maditra maivana Tamka. Mendrika handany vola efa ho 3 heny mihoatra ny amin'ny "mahazatra" ...
Fijerena gadget - sambo ho an'ny fanasana borosy avy amin'ny Amazing Art
Mug Art mahatalanjona amin'ny fanadiovana borosy - teo ambanin'ity anarana mirehareha ity dia nividy zavatra noforonina aho nandritra ny fiantsenana farany nataoko tamin'ny indostrian'ny modely, izay toa mety ho fitaovana ilaina tokoa. Izany ve no zava-misy? Mendrika handany azy ve ianao, horohoro mahatsiravina - saika PLN 7? 😉
Famafazana hevitra - loko akrilika ho an'ny fialamboly ho toy ny primer
Ilaina ny fototra. Tiako ny fananganana famafazana, saingy tsy tiako ny manapoizina ny olona ao an-trano amin'ny etona misy poizina. Raha miara-mipetraka amin'ny vadinao, reninao, rahavavinao, rahalahinao, alika na trondro ianao dia azo antoka fa efa nihaona tamin'ny fihetsiketsehan'izy ireo ianao 🙂 Raha mitady vahaolana azo antoka amin'ny fototra iorenan'ny besinimaro ianao dia notoroana hevitra ireto:
Fijerena gadget avy any Shina - fanapahana ravina